YEYINTNGE(CANADA): Thursday, May 29
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ စားနပ်ရိက္ခာရှားပါးမှု ကြုံရနိုင်
စားနပ်ရိက္ခာကို အနည်းဆုံး တနှစ်
လောက် ထောက်ပံ့ဖို့လိုနေပြီလို့ ကုလ
သမဂ္ဂ စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ကြီးက ပြောဆို
အကြာမှာ လေ့လာခန့်မှန်းချက်အရ ဧရာ
သောင်းချီတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေဟာ စားနပ် ရိက္ခာအကူအညီတွေ မရရှိကြသေးဘူးလို့ FAO ကုလသမဂ္ဂ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့က ပြောဆိုလိုက်တာပါ။
စားရေရိက္ခာပြတ်လပ်မှုနဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ အဆမတန် တက်နေတာကြောင့် နိုင်ငံရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့လည်း FAO အဖွဲ့ကြီးက သုံးသပ်ထားပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့မှာ ဆန်ဈေးနဲ့ တခြားအခြေခံစားကုန်တွေ ဈေးတက်သွားတယ်လို့ သတင်း
စားနပ်ရိက္ခာရှားပါးတဲ့ပြဿနာကို ရှောင်နိုင်ဖို့အတွက် လာမယ့်သီတင်းပတ်တွေ
အတွင်း စပါးစိုက်ပျိုးရေးအတွက် လုံးပမ်းဖို့လိုမယ်လို့လည်း ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စပါးကျီလို့ တင်စားရတဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းမှာ ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကြောင့်
သေဆုံးသူနဲ့ ပျောက်ဆုံးသူပေါင်း ၁၃၄,၀၀၀ ရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
မြန်မာစစ်အစိုးရက သဘောတူညီခဲ့တဲ့အတိုင်း ကုလသမဂ္ဂ လက်အောက်ခံ အဖွဲ့
အစည်းတွေက မြန်မာနိုင်ငံကိုသွားဖို့ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ကူညီကယ်ဆယ်ရေး ကျွမ်းကျင်
၀န်ထမ်း ၄၅ ဦးဟာ မြန်မာပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ ရရှိခဲ့ကြပြီလို့ ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်း
စာနာမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးရုံးက မနေ့က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုပဲ လက်ခံခဲ့ပြီး မိမိတို့ဘာသာ ဒုက္ခသည်တွေဆီ ဖြန့်ဖြူး
မယ်လို့ မြန်မာစစ်အစိုးရက ပြောခဲ့ပြီး သီတင်းသုံးပတ် တင်းခံနေခဲ့ပြီးနောက် ကူညီ ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေ မြန်မာနိုင်ငံထဲကို လွတ်လပ်စွာ စီးဆင်းနေပုံရတယ်လို့
လည်း သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အရင်ရက်တွေတုန်းက မလှူရ၊ မတန်းရလို့ တားမြစ်ခံထားရတဲ့ ပြည်တွင်း ပုဂ္ဂလိက အလှူရှင်တွေ မည်သူမဆို ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်း
ပေါ်ဒေသ မုန်တိုင်းသင့်ဒေသတွေကို သွားရောက်ပြီး လှူဒါန်းနိုင်တယ်လို့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
ထုတ် မြန်မာအစိုးရသတင်းစာတွေက ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/29/20080အကြံပြုခြင်း
နိုင်ငံတကာအကူအညီ မပါဘဲ ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ထူထောင်ရေး မဖြစ်နိုင်
ဧရာဝတီတိုင်းက မုန်တိုင်းဒဏ် အပြင်း
အထန်ခံစားခဲ့ရတဲ့ လူထုဟာ နိုင်ငံတကာ
ကလှူတဲ့ ချောကလက်တောင့်တွေ မစား
ရရင်လည်း ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ရှင်သန်
နိုင်တယ်၊ မကြာခင်မှာဘဲ ပြန်လည်လန်း
ဆန်း ဖူလုံလာကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီး မြန်မာ
စာပါ ဆောင်းပါးတပုဒ်မှာ ဆိုထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို အကူအညီပေးလုပ်ငန်းတွေ
အဓိက ဦးစီးဆောင်ရွက်နေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ
တာဝန်ရှိသူတဦးကတော့ အကူအညီတွေ လိုနေသေးတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ သံသယ ဖြစ်စရာမရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီအတောအတွင်းမှာပဲ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ကူညီကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားတွေကို ပြည်ဝင်
ခွင့်ဗီဇာတွေ အဟန့်အတားမရှိ ထုတ်ပေးလိုက်ပြီဆိုတဲ့ သတင်းတွေလည်း ထွက်လာ
ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းတွေကို စုစည်းပြီး ဘန်ကောက်ရောက် ဗွီအိုအေ၀ိုင်းတော်သား ကိုကျော်ကျော်သိန်းက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
နိုင်ငံတကာက အကူအညီတွေ ပေးနေတာကို သတင်းစာဆောင်းပါးက ကျေးဇူးတင်
စကား ဆိုထားပေမယ့် မြန်မာပြည်သူတွေဟာ နိုင်ငံခြားအကူအညီ အထောက်အပံ့
တွေ မရပေမယ့်လည်း မိမိတို့ဘာသာ ရပ်တည်ထူမတ်နိုင်သူတွေ ဖြစ်ကြတယ်လို့
ဆိုထားပါတယ်။ ဒီအဆိုကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ အဓိက ဦးစီးဆောင်ရွက်နေတဲ့ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ (WFP) ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ညွှန်ကြား
ရေးမှူးနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူ မစ္စတာ ခရစ္စ ကေး (Mr. Chris Kaye) က သဘောမတူ
“ကျနော် အဲဒီဘက်ကို မနေ့ကရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အင်မတန်ကို ထင်ရှားပါတယ်။ ရွာ
နှစ်ရွာကို ကျနော်ရောက်ခဲ့ရာမှာ အဲဒီရွာတွေက လူတွေဟာ အထိတ်တလန့် အခြေ
အနေမှာ ရှိနေကြဆဲပါ။ မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပြီး ၂၄ ရက်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတောင်မှ
သူတို့ရွာတွေကို ပြန်ဆောက်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေ စတင်နိုင်အောင် သူတို့တွေ ရုန်းကန်
နေကြရဆဲ ရှိပါသေးတယ်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်တွေ ပြန်စနိုင်ဖို့ဆိုတာကို
ထားလိုက်ပါဦး။ ကျနော်တို့ ထောက်ပံ့နိုင်သမျှ အကူအညီအားလုံးကို သူတို့လိုအပ်ပါ
တယ်။ ဒါကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ကျနော့်မှာ သံသယမရှိပါဘူး။” လို့ ခရစ္စ ကေးက
သူပြောတာကို သဘောတူလက်ခံတဲ့ နောက်တဦးကတော့ အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်း
တွေကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ပြည်တွင်းက ပုဂ္ဂလိက အလှူရှင်တဦးပါ။ မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်ထားတဲ့ လူထုဟာ ကိုယ့်ဘာသာ ရပ်တည်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ လုံးဝကို မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးတဲ့။
“အခုလောလောဆယ် စားဖို့အတွက်တောင် ပြည့်ပြည့်၀၀ မရနိုင်သေးဘူး။ လက်ရှိ
ရန်ကုန်ဘက်က စေတနာရှင်တချို့ ပေးနေတာကလည်း လတ်တလော ပေးနေတဲ့
အချိန်ကာလမှာ စားနိုင်ရုံလောက်ပဲရှိတယ်။ ကျနော်တို့သွားတဲ့ဟာက နှစ်နပ်စာ၊
တရက်စာ အများဆုံးပေါ့။ သူတို့ ကျန်တဲ့ စားဖို့သောက်ဖို့အတွက် လနဲ့ချီပြီး ကြာမယ့်
ကိစ္စကိုး။ ကျနော်တို့လည်း အဲဒီလောက်အထိ ကြာကြာသွားမပေးနိုင်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ
ဆိုတော့ ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင် ရန်ကုန်မှာလည်း လူတယောက်က အနည်းဆုံး သွပ် တချပ်လောက်တော့ လန်တာချည်းပဲ။ ကျနော်တို့လည်း ဒီထဲမှာ အပါအ၀င်ပဲ။ ဒါပေ
မယ့် ကျနော်တို့က ကိုယ့်ထက်ဆိုးတဲ့ လူတွေရှိလို့ သွားပေးတာ။
“နိုင်ငံတကာကလည်း မြန်မာပြည်မှာ ဒီကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒုက္ခသည်တွေနဲ့
ပတ်သက်ပြီး အာဏာပိုင်တွေဘက်က ပြည့်ပြည့်၀၀ မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာ
ကလည်း ဒီ့ထက်ချမ်းသာတဲ့လူတွေက ကျနော်တို့ဆီကိုလာပေးတာ။ ဒါပါပဲ၊ သေချာ ပေါက်လိုအပ်နေပါတယ်။ နောက်ထပ် အများကြီးလိုအပ်နေပါသေးတယ်။”
ဒီအတောအတွင်းမှာပဲ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အကူအညီပေး လုပ်သားတွေအတွက် အရင်က
ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့တဲ့ ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာတွေအားလုံးကို မြန်မာအာဏာပိုင်တွေက အတည်ပြု ပေးလိုက်ပြီဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်လာပါတယ်။ ဒါကို WFP ရဲ့ မစ္စတာ ခရစ္စ ကေးက အတည်ပြုပါတယ်။
“ဟုတ်ပါတယ်။ ကျနော်ရရှိတဲ့ သတင်းတွေအရဆိုရင်တော့ အရင်တုန်းက လျှောက်
ထားခဲ့တဲ့ ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာတွေကို ပြဿနာတခုခုမရှိဘဲ အတည်ပြု ထုတ်ပေးလိုက်
မုန်တိုင်းဒဏ် အပြင်းအထန်သင့်ခဲ့ရတဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းက ဒေသတွေဆီ ကုလသမဂ္ဂ
အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေကလူတွေ သွားခွင့်ရကြပြီဆိုပေမယ့် ဗျူရို
ကရေစီ ကြိုးနီစနစ် အတားအဆီးတွေကတော့ ရှိနေဆဲပါ။ ခရစ္စ ကေးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့
ရက်ပိုင်းကမှ လပွတ္တာကို သွားရောက်ခဲ့ပြီး အဲဒီမှာ တညနေပြီးတဲ့နောက် မနေ့ည
“ဒါပေမယ့် လပွတ္တာကိုသွားတဲ့လမ်းမှာ စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက် ခွင့်ပြု
မိန့် စာရွက်စာတမ်း လိုပါတယ်။ ခရီးသွားဖို့ ခွင့်မပြုခင်မှာ ကျနော်တို့ လိုက်နာလုပ်
ဆောင်ဖို့ အာဏာပိုင်တွေက ချမှတ်ထားတဲ့ ဗျူရိုကရေစီ ယန္တရားအဆင့်တွေကို
ဖြတ်သန်းရပါတယ်။ ဆိုတော့ မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်ဒေသတွေဆီကို ရောက်ဖို့ ကားပေါ် တက်သွားလိုက်ရုံနဲ့ရတဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်မျိုး ကျနော်တို့မှာ မရှိပါဘူး။” လို့ ကမ္ဘာ့စားနပ်
ရိက္ခာအဖွဲ့ (WFP) ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူ
မစ္စတာ ခရစ္စ ကေးက ပြောပါတယ်။
လေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက် ဘယ်သူမဆို၊ ဘယ်သူ့အတွက်မဆို၊ ဘယ်ဒေသမှာ
မဆို လွတ်လွတ်လပ်လပ် လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်လို့ အစိုးရအာဘော် သတင်းစာတွေမှာ
အခုရက်ပိုင်း ဆက်တိုက်ဖော်ပြလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပုဂ္ဂလိကအလှူရှင်တွေကို ခြိမ်းခြောက်တာတွေ၊ ဟန့်တားနှောင့်ယှက်တာတွေ စတဲ့သတင်းတွေကတော့
ဒါ့အပြင် မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်ဒေသတွေမှာ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေ လုပ်နေတာကို
လည်း ဖော်ပြနေပေမယ့် မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်သွားလို့ နေမရသေးတဲ့၊ ရေတွေပြည့်နေတဲ့ သူတို့ဒေသတွေဆီ လူတွေကို အတင်းအကျပ်ပြန်ခိုင်းတာတွေ၊ အဓမ္မအလုပ်ခိုင်းစေ
တာတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကလည်း ထွက်နေပါတယ်။
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေက တာဝန်ယူ လုပ်
ဆောင်နေတဲ့ သတင်းတွေကိုလည်း ဖော်ပြနေပါတယ်။ တဖက်မှာတော့ ပြန်လည်
ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို စစ်အစိုးရနဲ့ အကြောင်းအပေါင်းသင့်တဲ့ စီးပွားရေး
သမားတွေက လက်ဝါးကြီးအုပ်လိုက်တာကြောင့် လယ်သမားတွေ ထပ်ပြီး နစ်နာကြရ
ဦးမှာကို စိုးရိမ်မှုတွေကလည်း ပေါ်ထွက်နေပါတယ်။
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဖို့အတွက် အမေရိကန်
ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၁၁,၀၀၀ လိုမယ်လို့ မြန်မာစစ်အစိုးရက တောင်းခံထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဘာ့ကြောင့် ဒီငွေပမာဏလိုတယ်၊ ဘာတွေလုပ်မယ်၊ လိုအပ်တာတွေက
ဘာတွေ၊ ဘယ်လို အကောင်အထည်ဖော်မယ် စတဲ့ အသေးစိတ် တိုင်းတာစစ်ဆေး
ထားတဲ့ အချက်အလက်တွေ၊ ကျကျနနရေးဆွဲထားတဲ့ အစီအစဉ်တွေကို ပြောမထား
ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့်လည်း ဒီငွေပမာဏကို ကုလသမဂ္ဂနဲ့ အာဆီယံအပါအ၀င် ဘယ်သူက
မှ အတည်ပြု လက်ခံထားတာလည်း မရှိသေးပါဘူး။ လက်ရှိအချိန်မှာ ကူညီကယ်ဆယ် ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် သက်သက် ကုလသမဂ္ဂက မေတ္တာရပ်တောင်းခံထားတဲ့ ငွေ
ပမာဏဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀၁ သန်းဖြစ်ပြီး ဒီငွေပမာဏရဲ့ တ၀က်နီးပါး
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန် ကီ-မွန်း (Ban Ki-moon) အပါအ၀င် ကုလ
သမဂ္ဂ တာဝန်ရှိသူတွေ၊ ASEAN အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေက
တော့ မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်လူထုကို ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ မပြီးသေးဘူး၊
အနည်းဆုံး နောက်ခြောက်လလောက်တော့ ဆက်သွားရဦးမယ်၊ လက်ရှိအဆင့်ဟာ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအဆင့် မရောက်သေးဘူးလို့ ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
International Campaign for Food and Freedoms of Burmese People
Burmese democratic organizations – along with Burma campaign groups – around the world are calling for an immediate international intervention in Burma, reminding the international community that this is the time to bringachange in the military-ruled country.
And they call for formation ofa“coalition of the willing” among like-minded counties such as U.S., U.K., French, Canada, and Australia, in order to advanceacollective interest in ensuring safe and unhindered humanitarian access, as well as for promotion and protection of fundamental rights and freedoms for Burmese people.
They strongly criticize the United Nations and Association of South East Asia Nations (ASEAN) for their repeated failure to live up to the international community’s expectation in providing food and freedoms for Burmese people, and for falling into trap the Burmese military junta set.
Dr. Cynthia Maung (Burma Medical Association) Thailand
Dr Khin Saw Win (Alice) (Burma Medical Association) Canada
Tin Maung Htoo (Canada)
Canadian Friends of Burma www.cfob.org
Tel: 613-237-8056 tinmaunghtoo@cfob.org
Dr. Raymond Tint Way (Australia)
Concerned Burmese Physicians and Professionals www.cmpp-burma.blogspot.com
Dr Ko K Lay (UK)
Tel: 00 44 07790 427271 drkokolay@yahoo.co.uk
Dr. Soe Naung (Jamaica)
Tel: 876-995-2875 soehtwe@cwjamaica.com
Dr. Aye Min (USA)
Tel: 804-512-4669 radiomin@gmail.com
Moe Thee Zun (USA)
Democratic Federation of Burma
Ar Kar Soe (USA)
Anti-Dictatorship People’s Freedom Movement www.adpfmburma.com
arkarsoee@yahoo.com Tel: 301-213-0605
Yin Aye (USA)
Democratic Burmese Students Organization (USA)
yindbso@hotmail.com Tel: 301-905-7591
Tin Maung Thaw (General Secretary) (USA)
Committee for Restoration of Democracy in Burma
Min Yan Naing (Burma)
Democratic Federation of Burma (Japan)
Tel: +81-9015062893 kokoaung_dfbjp@yahoo.com
Kyaw Kyaw Soe (Japan)
League for Democracy in Burma (Japan)
Tel: +81-9060314394 sayarkway@hotmail.com
Khin Sandi (USA)
Women on the Move for Burma
Tel: 917 445 9222 freeassk@yahoo.com
Ko Myo (USA)
88 Generation Students (Exile)
Tel: 347-668-5046 http://www.pbase.com/komyoe88
Oversea Burmese Patriots (Singapore)
aungsayapyi@gmail.com Tel: +65-9487-4413
Taw Thar Gyi (Burma)
Democratic Front of the Patriots (HQ)
Shwe Htee (USA)
Nonviolent Empowerment Organization
shwehtee@yahoo.com Tel: 571-235-4035
Dr. Thi Ha (USA)
Burmese Democracy Forum (Fort Wayne - Indiana)
Dong Khup (USA)
Aung Nyaw Oo (Canada)
Tel: 416-262-5447 Aungoo205@yahoo.com
Guiding Star (Burma)
Ko Myat Soe (USA)
Justice for Human Rights in Burma ( http://www.jhburma.org/ )
msoe9872@aol.com Tel: 260-615-0575
U Than Aung (Canada)
Tel: (780) 439-7555
Cell :(780) 953-9877 www.burmawatch.org
Dr. Win Naing (UK)
Burmese Democratic Community
Tel: 0208 2067340 walaynaing@aol.com
Musicians converge forabenefit concert to aid the people of Burma.
Monkey Junk (featuring Tony D and Steve Marriner)
323 Bank Street, Ottawa
Ottawa (May 29,2008) - In response to the tragic events following the recent devastating cyclone in Burmaaconcert has been organized to raise funds foracountry in need. Some of Ontario’s finest performers have offered to donate their talents to an excellent evening of entertainment at Ottawa’s premiere music hall, Barrymore’s. All proceeds will go directly to Canadian Friends of Burma and The Humanitarian Coalition.
In addition to his reputation asaprolific producer, filmmaker, and avant-garde pianist, Bob Wiseman is arguably one of the country’s most talented songwriters, withadiscography that includes eight solo recordings on top of the work he’s done with artists such as Blue Rodeo, Edie Brickell, and John Oswald. With his thought-provoking social commentary Bob Wiseman is an apt addition to the evening and is sure to capture the spirit of the event.
Tony D is Ottawa’s Dean of the Blues. For decades he has been developing his talents before growing audiences both at home and abroad. He has recently teamed up with Canada’s preeminent harmonica player, Steve Marriner, to createanew band, Monkey Junk. While the Tony D Band was busy wowing audiences on his many tours of Europe and playing in Bosnia and the Middle East for the troops, Steve Marriner was busy touring the world stealing the show night after night onstage with Harry Manx. Together as Monkey Junk, Canada’s most invigorating blues players have createdaworld-class sound that is infectious and undeniable.
The Murder Plans are fairly new on the Canadian musical landscape, but their Brit-pop sound that blends the Talking Heads with the Clash leave them withastyle that is at once familiar and unnervingly catchy. Instantly memorable and immensely danceable, the Murder Plans are quickly emerging asacampus radio phenomenon through their recently released eponymous EP.
Cyclone Nargis struck the southwest coast of Myanmar on Saturday, May 3, 2008 with wind gusts up to 240 k/ph. Current figures are estimating that over 1.5 million people have been severely affected, with as many as 100,000 feared dead and more than one million people homeless. Communication lines have been badly damaged and road travel is difficult. The challenges to aid workers in this area are great but with help the obstacles are not insurmountable.
The Humanitarian Coalition isacoming together of four Canadian humanitarian relief organizations, CARE Canada, Oxfam Canada, Oxfam-Québec and Save the Children Canada, while Canadian Friends of Burma is an ongoing organization dedicated to providing support from within Canada for the struggle toward democracy and human rights for all the peoples of Burma. Both are respected and well established non-governmental organizations that are focused on helping where help is needed most. All proceeds from this event will go directly to these two organizations. Canadian Friends of Burma will have an information table set up on site.
-The Aloha Room, 323 Bank Street, (613) 233-0307 -Compact Music, 190 Bank Street, (613) 233-7626, and 785 ½ Bank Street, (613)
-The Ottawa Folklore Centre, 1111 Bank Street, (613) 730-2887 -Vertigo Records, 193 Rideau Street, (613) 241-1011 -Canadian Friends of Burma, 145 Spruce Street, (613) 237-8056
-Online at www.ticketweb.com
For more information please contact Heather Forbes at phorbesie@yahoo.ca or call
More Thai doctors on way to Burma
(BangkokPost.com) –Public Health Minister Chaiya Sasomsab will leadateam of medical experts to help victims of cyclone Nargis in Burma again.
The new team of assistants sent over to Burma comprise physicians, paediatricians, psychologists, dentists and engineers. They are expected to provide assistance to the victims of the cyclone for 14 days and will, together with Burma’s public health officials, lay down future strategies to cope with the aftermath of the disaster.
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/29/2008 1 အကြံပြုခြင်း
နိုင်ငံတကာအကူအညီ မပါဘဲ ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ထူထောင်ရေး မဖြ...
စစ်အစိုးရ ၀င်ခွင့်မပေးလျှင် အမေရိကန် စစ်သင်္ဘောများ ...
နိုင်ငံတကာက ကန့်ကွက်နေသည့်ကြား ဖွဲ့စည်းပုံကို စစ်အ...
Musicians converge forabenefit concert to aid th...